Labour Congress alaghachịgo n’oru
Ndị otu Labour Congress alaghachịgo n’oru ka ha gbachara abụbụ ọrụ.
Goodluck Jonathan ezigagooro onye isi ala Ijipt a hoputara ohuru ozi nkwado
Ozi anyị nwetere n’aka ndị Voice of Nigeria na-ekwu na onye isi ala Nigeria, bụ Goodluck Jonathan, ezigagooro Dr Mohamed Morsi ozi nkwado. Na ntụlị aka izugbe nke e mere na mba ahụ na nso a, ndị Ijipt họpụtara Morsi ka ọ chịrị ha gawa.
Govano Rochas Okorocha ezigagoro Adams Oshiomole ozi iti aka n’obi
Ozi anyị siri n’aka gọọmenti Steeti Imo nwete na-ekwu n’aka na-achị Steeti Imo, bụ Rochas Okorocha, ezigagoro onye ogbo ya, bụ Adams Oshiomole, aka na-achị Steeti Edo, ozi iji tie ya aka n’obi maka ihe mberede okporo ụzọ ahụ dakwasịrị ndị otu ya n’ụzọ e si aga Auchi. Na ngwụsị izu ụka a gara aga, ihe mberede okporo ụzọ dakwasịrị ụgbọala ndị na-etiri Oshiomole mkpu n’ụzọ Auchi.
Ajụjụ ọnụ ndị Nigerian TV Online gbara Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu tupu ọ nwụọ.